SHANGHAI TAOLE MACHINE CO., LTD dia Mitarika ny matihanina Manufacturer, Supplier sy mpanondrana ny maro samihafa ny Weld fiomanana milina toy ny lovia Bevelling Machine, Sodina Bevelling Machine, Sodina nandidy sy Bevelling Machine sns , izay be mpampiasa any Steel Fanorenana, fanamboaran-tsambo, Aerospace, Pressure fanaka orinasa, menaka & Entona sy ny orinasa mpamokatra entana rehetra welding indostria. Manana "GIRET" sy ny "TAOLE" roa marika ho an'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny fitsipika sy ny milina toy ny isan-namboarina fepetra takiana .. isika fanondranana ny vokatra any amin'ny tany maherin'ny 50 tsena anisan'izany Aostralia, Rosia, Asia, Nouvelle-Zélande, Eoropa tsena, sns Ary koa ny fametrahana mpiasa sy ny wholesalers ao manerana izao tontolo izao, isika manao fanomezana be mba hanatsarana ny fahombiazana eo amin'ny beveling sy ny fikosoham-bary ho an'ny Weld fanomanana.
Amin'ny maha-matihanina fanamboarana ao Shina, mirehareha isika ny ho itokisana amin'ny ISO 9001: 2008, taona Certificate sy Sira Certification, Izany Fanahy izany no porofo ny fomba tsara izahay, ka mamoaka ny machines.With ekipa mpamokatra, fampandrosoana ekipa, ekipa fandefasana entana, ny varotra sy ny aftersales asa fanompoana ho an'ny mpanjifa ekipa fanampiana.
Ny milina dia nandray tsara avo malaza ao an-toerana sy any ampitan-dranomasina na ny tsena satria isika dia miasa ao amin'ny orinasa ity avy amin'ny 2009. Mihoatra noho 10 taona 'experiance, injeniera ny ekipa foana mivoatra sy fanavaozana milina mifototra amin'ny angovo famonjena, avo fahombiazana, safty tanjona hatramin'ny taranaka voalohany ka mandraka ankehitriny mivoaka taranaka. Milina isan-karazany modely ho an'ny mpanjifa 'safidy saika afaka mihaona rehetra beveling fangatahana welding orinasa avo fampisehoana.
Ny asa fitoriana dia "toetra, asa fanompoana sy FANOLORAN-TENA" . Omeo ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa manara-penitra sy ny asa fanompoana lehibe.